Indlu yaseLakeside - icociwe, kude nesihlwele.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPrakriti
Lo ngumgangatho ophantsi wendlu ezimeleyo eGaria Patuli kufuphi nechibi. Indawo ikufuphi nesibhedlele iPeerless kunye nesikhululo seMetro saseKabi Subhash. Iphumile kwi-EM Bypass. Umgangatho wonke sinikezela ngokuhlala ekhaya. Kukho amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elinye kunye nekhitshi kunye nendawo yokutyela. Yindlu enomoya kakhulu ecaleni kwechibi nakwi-EM Bypass.
Lo ngumgangatho ophantsi wonke onegumbi eline-air-conditioning (isiseko sentlawulo esongezelelweyo) esinebhedi ephindwe kabini, itafile yokufunda, kunye ne-wore-drop. Elinye igumbi elingeyo-AC, linebhedi enye kunye netafile encinci ecaleni kwebhedi kunye nomabonakude. Omabini amagumbi adityaniswe ligumbi eliqhelekileyo elinokusetyenziswa njengendawo yokulala eyongezelelweyo. Ungasebenzisa kwakhona iPatio. Amagumbi aneefestile ezinkulu. Indawo epholileyo kakhulu kwaye enoxolo yokuhlala kwaye uphumle. Ngokwenyani akukho ngxolo yendlela, eyintsikelelo kwisixeko esinjengeKolkata. Inika ikhitshi kunye negumbi lokuzoba. Uphahla lunika umbono omhle wesixeko esiseluhlaza. Indawo ingaphandle nje kwengxolo yedolophu kodwa ukuhamba imizuzu emi-5 ukuya eKabi Subhash Metro Station kunye nenkonzo elungileyo yebhasi kuzo zonke iindawo zesixeko.
Ukhululekile ukufikelela kuwo wonke umgangatho, oquka igumbi lokutyela, ikhitshi kunye negumbi lokuzoba.
Uya kufumana i-wifi ekhawulezayo ekhawulezayo, izinto zakudala kunye neencwadi zokukhangela. Kukho igiza kwigumbi lokuhlambela. Ikhitshi ine-induction cooker kunye ne-microwave kunye nefriji.
Le ndlu isecaleni kwendawo entle yamanzi apho abantu beza kuphuma kunye nokukhwela isikhephe.
Le yindawo yegcisa; ilula kodwa yenziwe ngencasa.
Ngelixa ubhukishayo nceda unikeze iprofayile yakho emfutshane. Kufuneka uphathe iGovt. Ubungqina besazisi sefoto.
Nceda ungamemi iindwendwe, okanye ulungiselele amatheko.
Nceda ukhumbule ukucima zonke izixhobo zombane phambi kokuba uphume kwigumbi/igumbi lokuhlambela/ekhitshini.
4.70 · Izimvo eziyi-38
Ilokishi yaseBaishnavghata Patuli yidolophu esanda ukwenziwa eKolkata. Ibonelela ngezona ndawo zintle kuzo zonke izibonelelo zasedolophini kunye nokuchukumisa iintyatyambo kunye nefauna. Isikhululo sikaloliwe seB.P Lokishi yiNew Garia. Ikuthatha ukuya eCentral kolkata kwimizuzu engama-40. Indawo engaphantsi komhlaba kwilokishi ye-B.P sisikhululo saseKabi Subhash kwaye kuthatha imizuzu engama-30 ukufika e-Esplaned okanye ePark Street - umbindi weKolkata. Indawo ijikelezwe ngeenxa zonke kunye neMpuma yeMetropolitan Bypass. Inkonzo yebhasi enomoya iyafumaneka kwisikhululo seenqwelomoya kunye nesikhululo saseHowrah (iBus no- AC24 kunye neAC34). Ikwenza kube lula ukuhamba ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye neCandelo-V.
Le yinxalenye eseMazantsi eMpuma yeKolkata. Nje ngaphaya kwe-EM Bypass ehamba ecaleni kwempuma yesixeko saseKolkata. Ungafikelela kumbindi wesixeko ngeMetro Railway phakathi kwesiqingatha seyure. Kukho imarike yendawo; Imakethi edadayo kunye nodederhu lweevenkile zeMetropolis lukufutshane kakhulu nendlu yethu. Kukho inani leendawo zokutyela kunye neeresityu kwindawo eneendlela zokuhanjiswa ekhaya. Udederhu lweevenkile lunayo inkundla yokutya. Kukho ii-ATM ezithile. I-Benu-bana-chhaya-i-eco-park ngasemva kwendlu yethu yindawo entle yokuhlala. Zonke izinto eziluncedo ziyafumaneka, kodwa, ubumelwane buluhlaza, buzolile kwaye bunoxolo.
Umbuki zindwendwe ngu- Prakriti
Ndinomntu okhathalayo ojonga indawo. Ndihlala ndifumaneka efowunini naku whatsapp. I am phone call away.Ndihlala ndindwendwela endlini.